Igumbi leendwendwe elilodwa kunye nesidlo sakusasa saseVilla Roma - I-Airbnb
Igumbi leendwendwe elilodwa kunye nesidlo sakusasa saseVilla Roma
Igumbi lakho lokulala e indlu enendawo yokuphola sinombuki zindwendwe onguRomana
Igumbi leeNdwendwe (16 m2) kunye lokuhlambela kwindawo ezolileyo, 1700 m. Ukusuka Market Square. Igumbi libekwe kumgangatho ophantsi wendlu ye-Kazimierz-style, apho unokuya khona ngokuthe ngqo kwigadi enhle kunye nenokuthula kunye nenani elikhulu leentlobo zezityalo. Igumbi lixhotyiswe ngefenitshala yokuqala ye-Art Nouveau. Kukwakho negumbi lokuphumla elinendawo yomlilo yeendwendwe zabucala, apho isidlo sakusasa sendalo esenziwe ngeemveliso zeKazimierz zasekhaya zinikezelwa. Ngesicelo esikhethekileyo, ndinikezela ngokutya (isidlo sasemini, isidlo sakusihlwa).
Ikhitshi enofikelelo oluthintelweyo.
Kukho iindawo ezininzi zokuhamba ezijikelezayo, iigoji ezininzi ezintle kumganyana nje omncinci. Indlu imi phezu kwenduli, umoya ococekileyo kakhulu
Umbuki zindwendwe ngu- Romana
Engqonge indlu yam kukho uthungelwano lwemiwonyo yasendle, enomtsalane, imiwonyo, imingxunya etshonileyo ... Ukuba ungathanda ukuthatha uhambo kunye nam okanye nomyeni wam, siya kukuthatha ngolonwabo kwaye ngaphandle kwentlawulo eyongezelelweyo. uhambo engaqhelekanga kunye intsomi, siya kukubonisa udonga lwamatye kunye iindawo ezimbalwa ukuba abakhenkethi musa ukufikelela. Iihambo zithatha malunga neeyure ezi-1-2.
Engqonge indlu yam kukho uthungelwano lwemiwonyo yasendle, enomtsalane, imiwonyo, imingxunya etshonileyo ... Ukuba ungathanda ukuthatha uhambo kunye nam okanye nomyeni wam, siya ku…